Ukusungula - Umagazini Design
Lwesihlanu 9 Apreli 2021
Isiphuzo Lo mklamo uyisidina soshukela neChia, umqondo oyinhloko bekuwukuklama i-cocktail enezinhlobo eziningi zokunambitha.Lokhu kuklanywa nakho kuza ngemibala ehlukene engabonakala ngaphansi kokukhanya okumnyama okwenza kube kulungele amaqembu kanye namakilabhu. I-Chia ingakwazi ukudonsa futhi igcinele noma yikuphi ukunambitheka nombala ukuze umuntu enze i-cocktail ene-Firefly angathola ukunambitheka okuhlukile igxathu negxathu. Inani lentengo lomsoco liphakeme uma liqhathaniswa namanye ama-Cocktails futhi konke lokho kungenxa yenani eliphakeme lokudla kukaChia kanye namakhalori aphansi . Lo mklamo uyisahluko esisha emlandweni weziphuzo kanye nama-cocktails.
Lwesine 8 Apreli 2021
I-Capsule I-Wild Cook capsule, iyi-capsule enezithako zemvelo ezahlukahlukene futhi iklanyelwe ukubhema ukudla nokwakha ukunambitheka kanye nephunga elihlukile. Iningi labantu likholelwa ukuthi okuwukuphela kwendlela yokwenza ukudla kubheme kungukushisa izinhlobo ezahlukene zokhuni kepha iqiniso ukuthi, ungenza ukudla kwakho kubheme ngezinto eziningi futhi kwakha ukunambitheka okusha nephunga elisha lonke. Abaqambi babona umehluko wokunambitheka emhlabeni wonke yingakho lo mklamo uguquguquka ngokuphelele uma kufikwa endabeni yokusebenziseka ezifundeni ezahlukahlukene. La makhompiyutha eza ngezithako ezixubile nezisodwa.
Lwesithathu 7 Apreli 2021
I-Curling Iron I-nano airy curling iron isebenzisa ubuchwepheshe obusha be-ion. Igcina ukuthungwa okubushelelezi, i-curl ecwebezelayo ecwebezelayo isikhathi eside.Ipayipi eligoqayo lenziwe ngokuhlanganiswa okune-canoic, lizizwa libushelelezi kakhulu. Igoba izinwele ngesisa futhi ngokushesha nomoya ofudumele wama-ion amabi. Uma uqhathanisa ne-curling irons ngaphandle komoya, ungaqedela ikhwalithi yezinwele ethambile. Umbala oyisisekelo womkhiqizo uthambile, ufudumele futhi umsulwa umhlophe, futhi umbala ogqamile ngumbala opinki.
Lwesibili 6 Apreli 2021
I-Hairenerener I-Nano airy iqonde ihlanganisa izinto zokwakha i-nano-ceramic coating technology ne-ubunifu we-iron yensimbi emisha, eletha izinwele ngobunono nangendlela elula ngokushesha. Ngenxa sensor kazibuthe phezulu cap nomzimba, idivaysi iyacisha ngokuzenzakalelayo lapho cap ivaliwe, ephephile ukuthwala azungeze. Umzimba onamakhompiyutha onokwakhiwa okungenantambo kwe-USB kulula ukuwugcina esikhwameni futhi uphathe, usiza izintokazi ukugcina i -irstyle enhle nganoma yisiphi isikhathi, noma kuphi. Isikimu sombala omhlophe no-pink siboleka idivaysi uhlamvu lowesifazane.
Ibhokisi Lesidlo Sasemini
Msombuluko 5 Apreli 2021
Ibhokisi Lesidlo Sasemini Umkhakha wokudla uyachuma, futhi ukuthatha imali sekuyinto yesidingo kubantu banamuhla. Ngaso leso sikhathi, kukhiqizwe udoti omningi. Amabhokisi amaningi wokudla asetshenziselwa ukugcina ukudla angaphindwa asetshenziswe kabusha, kepha izikhwama zepulasitiki ezisetshenziselwa ukupakisha amabhokisi wokudla empeleni azikwazi ukuphinda zenziwe. Ukuze kuncishiswe ukusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki, imisebenzi yebhokisi lokudla nepulasitiki ihlanganiswe ukuklama amabhokisi amasha emini. Ibhokisi le-bale liguqula ingxenye yalo libe isibambo okulula ukusithwala, futhi lingahlanganisa amabhokisi amaningi okudla, kunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki zokupakisha amabhokisi okudlela.
Sonto 4 Apreli 2021
Eye of Ra' Ifenisha Yobuciko Basemadolobheni Yomphakathi Mgqibelo 15 Meyi
NISSAN Calendar 2013 Ikhalenda Lwesihlanu 14 Meyi
GlassOn I-40 "i-Tv Ekhokhelwa Lwesine 13 Meyi
Isiphuzo I-Capsule I-Curling Iron I-Hairenerener Ibhokisi Lesidlo Sasemini Shaver